Home Wararka Gudaha Wasaaradda Xanaanada xoolaha Galmudug ayaa qalabka sheybaarka xoolaha kala wareegtay
Wasaaradda Xanaanada xoolaha Galmudug ayaa qalabka sheybaarka xoolaha kala wareegtay
Wasaaradda Xanaanada xoolaha Galmudug ayaa qalabka sheybaarka xoolaha kala wareegtay howl-wadeenada mashruuca
Biyoole oo ah madhruuc lagu maalgalinayo wasaaradaha kheyraadka oo ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug.
Munaasabada lagu wareejinayay qalabkaas sheybaarka ah waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Galmuudg Maxamed-deeq Cabdi iyo Agaasimaha guud ee wasaaradaas Dr. Suleymaan Mxaamed Saalax.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay howlwadeenada mashruuca Biyoole qalabkaan sheybaarka ee maanta lagu wareejiyay oo ah qalab casri ah, isla markaana muhiim u ah wasaaradda.
Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug, Dr. Suleymaan Maxamed ayaa isna dhankiisa ku nuuxnuuxsaday muhiimada uu qalabkani u leeyahay daryeelka caafimaadka xoolaha, wuxuuna ballan qaaday in dhawaan lagu howlgali doono qalabkan, si loo daboolo baahidii jirtay ee loo qabay daryeelka xoolaha iyo ogaanshaha cudurrada xoolaha Galmudug wajahayaan.
Previous articleKooxo hubeysan ayaa xalay Afgooye ku dilay Askari ha
Next articleMadaxweynahii hore Hir-Shabeelle Dr Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri Qofka sidaa ah waxaa la dhihi jiray waa geed nacas ah, fursadduu helay kama faa’iideysan, meeshuu joogayna waxba kama qabsan.
XAALAD ADAG OO ITOOBIYA KA TAAGAN.